अमेरिकाको न्युयोर्कमा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त - Koshi Online
अमेरिकाको न्युयोर्कमा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
फागुन २८, न्युयोर्क, अमेरिकी सहर न्युयोर्कको पूर्वतर्फ आइतबार भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्दा त्यसमा सवार दुई जनाको ज्यान गएको समाचार छ । सो दुर्घटनामा परी अरु तीन जना घाइते भएका छन् ।
तर, सो हेलिकोप्टरका पाइलट भने सामान्य मात्र घाइते भएका बताइएको छ । उक्त सानो हेलिकोप्टरमा पाइलटसहित छ जना मात्र सवार रहेका थिए । हेलिकोप्टर न्युयोर्कको पूर्वतर्फको नदीमा खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
निजी कम्पनीको हेलिकोप्टरलाई केही व्यक्तिले फोटो खिच्ने प्रयोजनका लागि भाडामा लिएर उडाएको अनुमान गरिएको छ । तर यस विषयमा विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन । प्रहरीले यस हेलिकोप्टर दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । (रासस)
तीन टनभन्दा बढी हात्तीको दाह्रा बरामद
सात वर्षीया बालिकाको प्रहरी थुनामै ज्यान गयो
रुसका एक प्रहरी, जसले गरे ५६ जनाको हत्या !
शिक्षकले गाली गरेपछि छात्राले गरिन् आत्महत्या
जेलमा रहेका नेताले सुरू गरे भोक हडताल
मेस्सीले बनाए ला लिगामा यस्तो रेकर्ड !
२ पुष २०७५, सोमबार १४:२५